Ahoana no hahalalana raha misy zaza simba | Bezzia
Ahoana ny fomba hilazana raha misy zaza simba
Maria Jose Roldan | 12/03/2021 22:00 | Ampianaro ny ankizy
Tsy misy ray aman-dreny tia miaiky fa simba ny zanany ary tsy mahazo fanabeazana sahaza. Na izany aza, io karazana fitondran-tena io dia fahita matetika kokoa noho ny mety hoeritreretinao ary mazava ho azy izao.
Noho izany, zava-dehibe ny fahafahana miatrika an'io olana io ara-potoana satria raha tsy izany dia iharan-doza izy ireo rehefa tonga amin'ny fahamatorana. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manana fitaovana ilaina mba hahafahana manitsy fihetsika manimba toy izany ho an'ny ankizy ary manakana ny zanany tsy ho simba.
1 Ahoana ny fomba hilazana raha misy zaza simba
2 Ahoana ny fanitsiana ny fihetsiky ny zaza simba
Misy fambara maromaro manondro fa zaza dia simba ary tsy marina ny fihetsiny:
Ho an'ny zaza tezitra amin'ny zavatra rehetra ary manana tantrums dia mahazatra hatramin'ny 3 na 4 taona. Raha aorian'io taona io dia mitohy ny hatezeran'ilay zaza, dia mety hidika izany fa zaza simba izy. Amin'ny vanim-potoana toy izany, ny hatezerana sy ny hatezerana dia ampiasaina mba hamitahana ny ray aman-dreny sy hahazoana izay tadiaviny.
Ny zaza manimba dia tsy manome lanja ny zavatra ananany ary manana kapoka foana. Tsy misy izay mahavita na mahafa-po azy ary tsy afaka mandray tsia ho valiny izy.
Ny tsy fahampian'ny fanabeazana sy ny soatoavina dia iray amin'ireo famantarana mazava fa manimba zaza. Miteny amin'ny hafa amin'ny fomba tsy misy fanajana tanteraka sy amin'ny fanamavoana tanteraka izy.
Raha simba ilay zaza dia ara-dalàna raha tsy mankatò ny karazana baikon'ny ray aman-dreny izy. Tsy afaka manaiky ny lalàna napetraka ao an-trano izy ary manao izay tiany.
Ahoana ny fanitsiana ny fihetsiky ny zaza simba
Ny zavatra voalohany tokony hataon'ny ray aman-dreny dia ny manaiky fa simba ny zanany ary tsy ampy ny fanabeazana noraisina. Manomboka eto dia zava-dehibe ny manitsy ny fihetsika toy izany ary manaraka andian-torolàlana izay manampy ny zaza hanana fitondran-tena mety:
Zava-dehibe ny hijoroana mafy eo anoloan'ny fenitra apetraka ary tsy hanaiky lembenana amin'ilay zaza.
Ny kely dia tsy maintsy manana andiana andraikitra tsy maintsy tontosa. Ny ray aman-dreny dia tsy afaka manampy azy ary ny kely dia manefa ny trosa hanefa azy ireo.
Ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifandraisana tsara dia fanalahidy hanehoana fanajana ny olon-dehibe. Ny olana mahazo ny ankizy ankehitriny dia ny hoe tsy dia miresaka amin'ny ray aman-dreniny izy ireo, miteraka fihetsika tsy mendrika.
Ny ray aman-dreny dia tokony ho ohatra ho an'ny zanany ary manana fitondran-tena mety eo alohan'izy ireo.
Tsara ny miarahaba ny zaza rehefa manao zavatra mety izy ary tsara izany. Ny fanamafisana ny fitondran-tena toy izany dia hanampy ny zaza ho afaka hanaja ny fomba samihafa napetraky ny ray aman-dreny.
Raha fintinina, Ny fanabeazana zaza dia tsy asa mora na tsotra ary mitaky fotoana sy faharetana be. Amin'ny voalohany dia mety ho sarotra amin'ny zaza ny mahatakatra ny fitsipika toy izany, saingy hianatra marimaritra soatoavina soatoavina izy izay hanampy azy hanao ny fitondran-tenany ho mendrika sy mety indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Ahoana ny fomba hilazana raha misy zaza simba
Boky 5 momba ny fiainana maharitra tokony hovakianao
Misy fiantraikany amin'ny fihodinan'ny rào ireo sakafo ireo